Kuthuthelwa kusikhathi se-R&D ku-Vocational Education | RayHaber | raillynews
IkhayaJIKELELEKuthuthelwa kusikhathi seR & D in Vocational Education
Kuthuthelwa kusikhathi seR & D in Vocational Education
21 / 05 / 2020 JIKELELE, HEADLINE, KUSASA NGAMINYE, TURKEY
I-R & D emfundweni yobungcweti
UMahmut Özer, iPhini likaNgqongqoshe Wezemfundo Kazwelonke, utshele iphephandaba ngezinhlelo zakhe zangemva kokuqhuma kobhubhane zezikhungo ze-R&D ezisungulwe ezikoleni zamabanga aphezulu ezisebenza. U-Özer uthe, "Sizoba nezikhungo ezingaba ngu-20 ze-R&D. Isikhungo ngasinye sizogxila endaweni ehlukile. ”
Ingxoxo yePhini likaNgqongqoshe Wezemfundo Kazwelonke imi ngale ndlela elandelayo: “Manje sesizongena esikhathini se-R & D kwezemfundo yezamakhono” Iphini likaNgqongqoshe Wezemfundo Kazwelonke Özer lathi lokhu kuzoba ngomunye wemibono ebaluleke kakhulu yokuqubuka kodaba lwezifundo ezingama-19. Sizofaka okusha ngokubheka ukusatshalaliswa. Sizoba nezikhungo ezingaba ngu-20 ze-R&D. Isikhungo ngasinye sizogxila endaweni ehlukile. Isibonelo, isikhungo esisodwa sizosebenzisana ne-software kuphela, kanti esinye sizogxila kubuchwepheshe be-biomedical device. Ukugxila kwayo okukhulu kuzoba ekuthuthukisweni komkhiqizo, ubunikazi, imodeli yokusebenza Sizohlala sandisa ibanga lomkhiqizo. Manje sizokwenza ukuqeqeshwa kothisha bethu kulezi zikhungo zezifunda zeR & D. ” Ukugcizelela ukuthi ikharikhulamu yemfundo yobuciko izovuselelwa ngokushesha ngemuva kwenqubo ye-automation, i-software, ubuchwepheshe bokufakelwa okwenziwe ngamakhono kanye namakhono wedijithali, u-Özer ukugcizelele ukuthi izikhungo ze-R&D zizoba negalelo elikhulu ekuvuseleleni.
UMnyango Wezemfundo Yezwe (MoNE) uqale ukuhlaselwa okukhulu ezinsukwini zokulwa nokuqubuka kuka-kovid-19. Inombolo enkulu yemikhiqizo yakhiqizwa kusuka ezintweni zokuhlanza izidumbu ezazidingeka ngaphambi kwesikole, ukusuka kumaskhi, ukusuka emseleni wokuvikela ubuso kuya kwengubo yokulahlwa kanye nokubekwa ngaphezulu. Ngale ndlela, i-MEB ibambe iqhaza elibalulekile ekunqandeni ubhubhane ezinsukwini zokuqala zomzabalazo. Wabe eseqhubeka nokukhiqizwa komshini wemaski, insiza yokuhlunga umoya, idivaysi ye-laryngoscope yevidiyo kusuka ku-respirator. Kule nqubo, ekhombisa ukubaluleka kwemfundo eqinile yokusebenza kwamakhono, iPhini likaNgqongqoshe Wezemfundo, u-MoNE Mahmut Özer, uchaze ukuthi luhlobo luni lokuhlelela imfundo yezemfundo ngemuva kokuqubuka kovid-19.
'Sibe nomthelela omubi'
Ngesikhathi sezinsuku zokulwa neKovid-19, ukuqeqeshelwa umsebenzi wezandla kunikeze ukuhlolwa okuphumelelayo. Ngabe uhlelela ini ngekusasa lemfundo yezandla, futhi elinokuhlangenwe nakho okumangalisayo?
Imfundo yobuciko ibilokhu inikela elikhulu kakhulu ezweni lethu ngokuqeqesha abasebenzi ngamakhono wobungcweti adingeka yimakethe yezabasebenzi iminyaka. Isifundo se-Vocational saba nesikhathi sokudangala ikakhulukazi ngemuva kokusebenzisa kahle isicelo. Ngalesi sikhathi, imfundo yezemfundo iyekile ukuba ukukhetha kwabafundi abaphumelele ngokwezifundo. Eminyakeni elandelayo, kwavela ukwethuka kwesibili ekusetshenzisweni kwamaphuzu okubekwa kuzo zonke izikole eziphakeme. Okwenzekile ngemuva kokuthi uhlelo lokulingana luqale ukuphindaphinda, imfundo yezandla iphinde yaphenduka inketho yokuphoqelelwa kwabafundi abangaphumelelanga. Lezi zinqubo zibe nomthelela ongemuhle ekuziphatheni kwabaphathi nabothisha bethu ezikoleni zethu eziphezulu zomsebenzi. Imfundo yobuciko seyaziwa ngezinkinga, ukungahambi kahle kwabafundi namacala okuqondiswa kwezigwegwe. Ngenxa yalokhu, ukungakwazi kwabafundi ukubhekana nalokho okulindelwe emakethe yezabasebenzi kwaqinisa umbono ongemuhle ngemfundo yezandla. Ngakho-ke, kwaba nokulahleka okungathi sína kokuzethemba emfundweni yobuciko.
Ingabe ukuzethemba kutholakala ngokuphelele kule nqubo?
Ngqo. Umthelela obaluleke kakhulu wale nqubo ubuwukuzethemba kabusha ezinsukwini zakudala ezihlonishwayo zemfundo yezemfundo. Uveze ukuthi yini angayenza uma izinkinga zakhe zixazululwa, enikwe amathuba futhi egqugquzelekile. Kule nqubo, yafika ku-ajenda namandla ayo okukhiqiza kanye nokukhiqiza, hhayi ngezinkinga zemfundo yemfundo yobuciko. Njengoba izinhlangano zabezindaba zezwe nezamazwe omhlaba zibeka impumelelo ethe xaxa, ukuzethemba kukhuphuka. Njengoba ukukholelwa kulokho abangakwenza, ukukhiqiza, nokuthi bakhiqiza ngani kubalulekile, impumelelo yafika nayo.
'Zonke izikhungo zizogxila endaweni eyodwa'
Ngabe izikhungo ze-R&D zizohlala njalo ezinsukwini ngemuva kokuqubuka kukaKovid-19?
Emfundweni yobuciko, manje sesidlula esikhathini se-R & D. Lokhu kuzoba ngenye yezimpumelelo ezibaluleke kakhulu zokuqubuka kweKovid-19 emfundweni yobuciko. Kule nqubo, sizokwengeza okusha ezikhungweni ze-R&D esizisungule, kucatshangelwa ukwabiwa kwezifunda. Lezi zifundo sezizophothulwa. Sizoba nezikhungo ezingaba ngu-20 ze-R&D. Isikhungo ngasinye sizogxila endaweni ehlukile. Isibonelo, isikhungo esisodwa sizosebenzisana ne-software kuphela, kanti esinye sizogxila kubuchwepheshe be-biomedical device. Izikhungo zizokhulumisana njalo futhi zizosekelana. Lezi zikhungo zizoba futhi izikhungo zokusebenza kahle. Ukugxila kwayo okukhulu kuzoba ekuthuthukisweni komkhiqizo, ubunikazi, imodeli yokusebenza, ukuklama nokwenziwa kwezimpawu zokuthengisa, ukubhaliswa kanye nokuthengisa. Sizohlala sandisa ibanga lomkhiqizo. Manje sizokwenza ukuqeqeshwa kothisha bethu kulezi zikhungo zesifunda ze-R & D. Lezi zikhungo zizoba negalelo elikhulu ekuvuseleleni ikharikhulamu yemfundo yezandla.
Ukwethemba kwabo kukhule
Singasho yini ukuthi ukutshalwa kwezimali okwenziwe yi-MEB ngemfundo yezandla eminyakeni emibili edlule kuthele izithelo?
Yebo. Njengenkonzo, sigxile kakhulu emfundweni yobuciko. Sithole amaphrojekthi aqakatheke khulu ngokulandelana. Okubaluleke kakhulu ukuthi okokuqala ngqa, senze ukubambisana okukhulu kanye nabamele abamele imikhakha kuyo yonke imikhakha yezemfundo. Ngakho-ke, ukuzethemba kwemikhakha emfundweni yobuciko kukhule kancane. Zonke lezi zinyathelo zinikeze impendulo esheshayo, ehlanganyelwe nenamandla ukwenza le nqubo.
Uzohlela kanjani kusuka manje?
Sizoqhubeka nokuqinisa umjikelezo wokukhiqizwa kwemisebenzi kwezemfundo kwezemfundo yamakhono. Sizobuyekeza njalo ukuqeqeshwa ngokubambisana okuqinile nemakethe yezabasebenzi. Sizokwenza izikole zethu eziphakeme amakhono zibe yizikhungo zokukhiqiza. Sizokhuphula ngokuqhubekayo umthamo wokukhiqiza wemikhiqizo nezinsizakalo, ikakhulukazi ngaphakathi kwezimali eziguqukayo. Isibonelo, ngonyaka ka-2019, sakhuphula imali etholwa ngumkhiqizo eyenziwe ngaphakathi kulesi silinganiso ngamaphesenti acishe abe ngu-40 aye kuma-400 ezigidi ze-TL. Ngo-2021, ithagethi lethu ukukhiqizwa kwe-1 billion TL. Udaba olubaluleke kakhulu ukuthuthukisa umthamo wokuqashwa kanye nezimo zokuqashwa kwabafundi emakethe yezabasebenzi. Ukusebenzisana esikwenzile nemikhakha ebekwe phambili ukuqashwa bekuyizinyathelo zethu zokuqala zalokhu. Lezi zinyathelo zizoqhubeka nokuqina.
'Yonke imikhiqizo esigxile kuyo yakhiqizwa'
Ususungule izikhungo ze-R&D ezikoleni zamabanga aphezulu ezifundayo. Yayiyini inhloso?
Umthelela wokuqeqeshwa kwabafundi ngezinsuku zokulwa neKovid-19 wawuphindwe kabili. Isigaba sokuqala sasihlanganisa ukukhiqizwa kwesisindo kanye nokulethwa kwemaski edingekayo, isibulala-magciwane, umsele wokuvikela ubuso, i-apron elahlekayo kanye nama-ovaroli. Lesi sigaba siphumelele kakhulu kanti ukwenziwa kwalokhu kulo mongo kusaqhubeka. Isigaba sesibili sigxile ekuklameni nasekwenziweni kwamadivayisi anjengemishini yokuphefumula kanye nemishini yemaski edingekayo ukulwa ne-kovid-19. Ukuze siphumelele esigabeni sesibili, sisungule izikhungo ze-R&D ngaphakathi kwezikole zethu eziphakeme ze-Anatolian ezifundazweni zethu ezinengqalasizinda eqinile. Siqinise ingqalasizinda yezikhungo zethu ze-R&D ekwakhiweni nasekwenzeni le mikhiqizo. Kwenziwa izifundo ezijulile kulezi zikhungo esizisungulele emadolobheni ethu afana ne-Istanbul, Bursa, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Konya, Mersin, Muğla kanye noHatay. Kulezi zikhungo, sikwazile ukukhiqiza yonke imikhiqizo esigxile kuyo. Kule mongo, imikhiqizo eminingi yenzelwe futhi yakhiqizwa njengomshini wokuhlanza imashl, umshini wokuphefumula, umshini wemaskhi ojwayelekile we-N95, idivaysi ye-laryngoscope yevidiyo, umbhede wokunakekelwa okujulile, umshini wokuhlunga umoya, iyunithi yesampula.
Uma ucabanga ngesibuyekezo sekharikhulamu, uzokwenza izibuyekezo ezintsha, ucabanga ukuthi imakethe yezabasebenzi izophuma ngemuva kokuqubuka kweKovid-19?
Kunjalo. Ngemuva kwale nqubo futhi kuzoba nokuvuselelwa ngokushesha kwekharikhulamu kwamakhono edijithali. Asizibheki izikhungo zemfundo yezemfundo nezobuchwepheshe njengezikhungo lapho kunikezwa khona imfundo yamakhono kuphela. Sifuna bonke abafundi bethu bathole amakhono asemqoka ukuze bakwazi ukuzivumelanisa nezimo zokushintsha nezobuchwepheshe nezenhlalo. Sifuna ukwehlisa umehluko phakathi kwemfundo yokufundisa nokujwayelekile ngokuhamba kwesikhathi. Ngakho-ke, sisebenzisana nezinhlangano eziqinile kwezobuchwepheshe nezemfundo ezinjenge-ITU ne-ASELSAN. Amakhono adingekayo ngokuya ngebuchwepheshe bensimu emakethe yemisebenzi azokongezwa kwikharikhulamu kuyo yonke imisebenzi yobufundisi esiyifundisayo. Kodwa-ke, ngeke saneliswe yilokhu, kepha sizosebenzela ukuqinisa amakhono ajwayelekile sabafundi bethu.
Ukuthutha kwehlobo kuqala eKocaeli
Uhlelo lwe-Mahmutbey lwe-toll-free
Amahora okuhamba e-Akçaray ukuya ehlobo
Ukuthuthwa komphakathi ku-Sakarya kudlula isikhathi se-Validator
Ukuvimbela I-Coronavirus ..! Isikhathi Sokuvakasha Esingaxhunyiwe Siqale eBursaRay
Ama-subsidiaries e-TCDD ahlangana eMfundweni
I-Protocol ngokubambisana eMfundweni phakathi kwe-TCDD ne-University of Ankara
Ukukhiqizwa kweMisa yezinqola ezintsha zokuhamba kwenqola
I-oda elisha lomgwaqo ku-Halkapınar lisaqhubeka
Izigaba zokugcina zidlula eKonak Tram
Abantu abayi-120 abahanjiswe nohambo lwezinsuku e-Antalya ...
Umphathi-Jikelele we-TÜVASAİ u-imbrahim Ertiryaki uzosungula ubudlelwano bezentengiso namazwe angomakhelwane.
I-Sakarya Yokuthutha Emphakathini Emphakathini Iqala Isikhathi Sokuhlola
UMOTAŞ usekulungele imfundo entsha
UKUTHUTHUKISWA KWE-RAILWAY KUVELA UKUPHILA UMSEBENZI
ubuchwepheshe bedivaysi ye-biomedical
umshini wokuhlunga umoya
Izikole eziphakeme ze-Vocational
Izikhungo ze-R&D ezikoleni eziphakeme ezifundayo
Umshini wemaski we-N95
ubuchwepheshe bokufakelwa bokufakelwa
Umbhede Wokunakekela Ojulile
I-TİGEM Ceylanpınar Irrigation Project isiza Ukuphila Ngakusasa
Ukuqeqesha ngokuqeqeshelwa abaqeqeshi baseYüntaş
Ukukhuthazwa kwe-Satso Professional kanye nezinsuku zokusebenza
I-Latest Technology Technology Brands ikhethiwe ekukhiqizeni izinqola zokuthutha
Ukuqeqesha ngezoqeqesho ze-EGO Drivers
U-Leonardo da Vinci Ukudluliswa Kwezinto Ezintsha Emisebenzini Yezemfundo Yezemfundo
2. Ukufaneleka kwe-Exam 20-22 ngoFebhuwari